Google Panda na Nkịtị English | Martech Zone
O siri ike ikwere na anyị na-abịa n'otu afọ ebe Google wepụtara ihe kpatara mmelite algorithm nke akpọrọ Google Panda. Ọ bịara na-enweghị ụfọdụ mgbu maka Google na, n'ikpeazụ, azum ka weghachite na Google Panda.
Mgbe otu afọ nke bibiri ihe Google weere dị ka saịtị "spammy", olee otu Panda si emetụta gị? Enweela mkparịta ụka na-enweghị nkwụsị n'etiti ndị na-ere ahịa ịntanetị na SEO banyere otu esi echekwa saịtị gị na Panda, mana yana mmelite niile na ntugharị na mgbanwe algorithm a, ihe nwere ike ịmegharị ngwa ngwa.
Ihe omuma a, Google Panda na Plain English, nwere ike ịbụ otu n'ime nkọwa nkọwa doro anya m hụla na mgbanwe nke Google Panda yana ndụmọdụ na-esote maka ụlọ ọrụ ndị na-agbaso usoro nyocha njikarịcha ihe nchọta.
Tags: panda googlealgorithm nke google pandagoogle panda mgbakealgorithm ọchụchọ google